WARBIXIN Xiiso Leh: 20-ka Kooxood Ee Ugu Qiimaha Badan Yurub Oo La Soo Saaray & Man City Iyo PSG Oo Hogaanka U Haya – Kooxda.com
Home 2018 February France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN Xiiso Leh: 20-ka Kooxood Ee Ugu Qiimaha Badan Yurub Oo La Soo Saaray & Man City Iyo PSG Oo Hogaanka U Haya
WARBIXIN Xiiso Leh: 20-ka Kooxood Ee Ugu Qiimaha Badan Yurub Oo La Soo Saaray & Man City Iyo PSG Oo Hogaanka U Haya
Kooxda Man Citya ayaa si raaxo leh ku haysa hogaanka horyaalka premier league xilli ciyaareedkan iyaga oo 16 dhibcood ka horeeya kooxda ay jaarka yihiin ee Man United iyada oo la ciyaaray 27 kulan oo horyaalka premier league ah.
Si kasta ha ahaatee Guardiola ayaa kooxda haatan ku dhisay lacag waali ah isaga oo ku kharash gareeyay lacag dhan 777 milyan euro sida laga soo xigtay shabakada daraarasada ee CIES Football Observatory.
Saxiixyada cusub ee ay ka midka yihiin xiddiga Aymeric Laporte oo kooxda ugu soo biira 57 milyan oo euro iyo xiddigaha Benjamin Mendy Iyo Kyle Walker oo min 50 milyan ku fadhiya ayaa k qayb qaatay kor u kaca qiimaha kooxda Man City.
Xaqiida ayaa ah in ayna jirin koox reer yurub ah oo ka ay kooxdeedu ka qaalisan tahay kooxda Man City iyada oo kooxda Paris Saint-Germain tahay kooxda kaliya ee xitaa ugu soo dhaw.
Kooxda reer France ayay kooxdoodu ku fadhidaa lacag dhan 712 milyan euro oo uu ka mid yahay xiddiga uguq aalisan suuqa kala iibsiga ee Neymar oo ku fadhiya 198 milyan euro.
Kooxda Man United ayaa ku soo xigta oo ah kooxda 3-aad ee ugu qiimaha badan iyaga oo ku fadhiya lacag dhan 661 milyan euro oo uu ku jiro xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba oo kor u qaaday qiimaha kooxda.
Dhanka kale kooxda Barcelona ayaa ku fadhida 642 milyan euro iyo halka kooxda chelsea ku jirto kaalinta 5-aad iyada oo kooxdeedu ku fadhido lacag dhan 524 milyan euro xilli kooxda Real Madrid si la yaab leh u noqtay kooxdaha ugu qiimaha yar.
Los Blancos ayay kooxdeedu ku fadhidaa qiimo ahaan 440 milyan euro iyaga oo 337 milyan euro ka dambeeya kooxda Man city ee horyaalka premier league.
Liverpool ayaa ah kooxda 4-aad ee ku jirta 7-da kooxood ee ugu qiimaha badan iyada oo ku fadhida 408 milyan euro iyada oo ay kor u qaadeen qiimeheeda xiddigaha Mohamed Salah & Virgil van Dijk bilihii ugu dambeeyay.
Arsenal ayaa iyadu qiimeheedu yahay 357 milyan euro halka Everton ku fadhido qiimo lacageed oo dhan 323 milyan euro halka qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn adduunka kubada cagta ee ay ka midka yihiin Bayern Munich iyo Atletico Madrid ayna xitaa ka soo muuqdan 10-ka kooxood ee ugu sareeya.
Halkan Kaga Bogo 20-ka Kooxood Ee haatan haysta kooxda ugu Ugu Qiimaha Badan
Lionel Messi Oo Tababaraha Kooxdiisa U Gudbiyay Liiska 5 Kulan Oo Uuna Doonayn In Uu U Ciyaaro Barcelona & Waliba Sababta La Ogaaday
Jose Mourinho Oo Paul Pogba U Sheegay Halka Arin Ee Uu Si Joogto Ah Ugu Ciyaari Karo Kooxdiisa Man United
Xiddigaha Kooxda Chelsea Oo Tababar Adag Qaatay Ka Hor Kulankooda Man United (Sawiro)
Arsene Wenger Oo Sheegay In Ay Man City Ugu Cad-Cadahay Finalka Carabao Cup-ka Laakiin Ay Jirto Hal Arin Oo Kooxdiisa Ka Caawin Doonta Ku Guulaysiga Koobka
Hordhac: Barcelona Vs Girona: Blaugrana Oo Rikoor Cusub U Dhigaysa La Liga Hadii Ay Guuldaro Iska ilaaliso Kulanka Girona